Aragtiwanaagsan.com – Ila akhriso Lixdan Xadiis ee sawiraaya Muqaalka Janada ilaahay!!!!
Latest update February 4th, 2019 4:32 PM
Laanta Af-ka carabiga ee BBCda, oo Wareysi la yeelatay..Dhakhtar rug cadda ah oo reer Masar ah oo beera Wadnaha iyo Kalyahay!!
Maahmaahyo-cusub!!/ Kuwii sanadkan cusub..2019!!
Kooras online ah,oo ingiriisiya ayuu kuu bilaabayaa Machadka Aqoonyahan College ee ku yaalla magaalada Hargeysa!!
Mareegta aragtiwanaagsan.com oo saaka booqatay xafiiska Agaasimaha Guud ee Maaliyadda!!
Ila akhriso Lixdan Xadiis ee sawiraaya Muqaalka Janada ilaahay!!!!
Jun 11, 2018 cabdicasiis mohamed Dhacdooyin, Qof Muhiim ah, Wararka, Waxbarasho 0
1-Rasuulku(NNK),waxa uu yidhi: Janada waxa ku yaalla,Taanbuug ka sameynsan Lu’lu,waa uu gudo ballaadhanyahay(Riwaayad kalena waxay leedahay),..balladhkiisu waa lixdan mayl.cidhifkasta oo ka mid ah,Taanbuugaasi waxa ku nool qoys aan arkayn kuwa kale,qofka muuminka ahi,waa uu ku dhex dawaafayaa!!!
(Xadiiskan waxa soo saaray Tirmiidi)
(Xadiiskani waxa uu inna tusayaa oo inoo faa’ideynayaa in qofka janada gala ilaahay siinaayo ..Xaasas faro badan oo xuural cayn ah,oo uu kolba qoys u tagaayo oo uu ku soo raxaysanaaayo)!!
2-Abaahureyra waxa uu yidhi: Rasuulka ilaahay (NNK)waxa uu yidhi:Janadu waxay ka kooban tahay; boqol darajo,masaafada labadii darajoba u dhaxaysaa waa in loo socdo,(100 sano),boqol sano, (xadiiskan waxa soo saaray Tirmiidi)!!
3-Abaahureyra waxa uu yidhi:Rasuulka ilaahay waxa uu yidhi: Ma jiro janada geed ku yaalla,haddii uu jirana,jiriddiisu ama dhudhunkiisu waa Dahab!!!!( waxa soo saaray Tirmiidi).
4.Anas waxa laga soo wariyey, (ilaahay ha ka raali ahaadee),waxa uu yidhi;Rasuulkii ilaahay waxa uu yidhi(NNK), in Qaanso la dhigo in leeg, oo janada ku taalla ,ayaa ka khayr badan Adduunyada iyo waxa dhexyaalla,haddii Haweenay reeraha janada ka mid ahi,ay istusto dadka ifka jooga,way iftiimin lahayd oo dharaar cad ayey ka dhigi lahayd adduunyada iyo waxa ku dhexyaalla ba!!!,waxayna ka buuxin lahayd udgoon,masarkeedaana ka khayr badan,Adduunyada iyo waxa dhex yaalla!!
Xadiiskan waxa soo saaray (Tirmiidi).
5.Abaa-saciid(ilaahay ha ka raali ahaadee),waxa uu yidhi;Rasuulka ilaahay(NNK),waxa uu yidhi:janada waxa ku yaalla,boqol darajo,haddii Caalamka oo dhammi ku kulmaan,midkood ayaa qaadeysa!!!(Tirmiidi).
6.Bureyda (ilaahay haka raali ahaadee),waxa laga soo wariyey,Waxa uu yidhi,Rasuulka ilaahay waxa uu yidhi:Janada Waxa ku sugan;Haween weyne (Xural-cayn ah),Waxay ku heesayaan,codad ayna maqal waxa ilaahay abuuray mid ka mid ah,waxay na leeyihiin(Annagu waxaanu nahay,Qaar barwaaqeynsan oon busaaradooneyn,waxaanu nahay,qaar Raaliyooyin ah,oo aan cadhooneyn,Waxa liibaanay cidda calaf nagu yeelata ama aanu calaf ku yeelanno…!!!!! (xadiiskan waxa soo saaray Tirmiidi)!!!
Diyaarintii iyo Turjumaadii:C.casiis Maxamed Yoonis(ansaari).
Waxa laga soo saaray Xadiistan…kitaabka la yidhaahdo(Tafsiirul-usuul ilaa Jaamicil-usuul,min Axaadiisi Nabiyi).
heestii shuhadada snm Ku naso xadiiskan Nabiga laga soo wariyey!
Maamulaha mareegta Aragtiwanaagsan.com...
Laanta Af-ka carabiga ee BBCda, oo...
Maahmaahyo-cusub!!/ Kuwii sanadkan...
Kooras online ah,oo ingiriisiya ayuu...
Maamulaha mareegta Aragtiwanaagsan.com oo saaka booqday xafiiska...
waxaan saaka xafiiskiisa ku soo booqday wasiirka warfaafinta Somaliland…Cabdiraxmaan Guribarwaaqo…wasiirku….waa nin aanu saaxiib nahay….waxa aan ku booqday xafiiskiisa qurxoon ee la yaabka lahaa sida loo quraaradeeyey…waxa uu ku jiray hawl-wasaaradeedkiisii maalin...
Laanta Af-ka carabiga ee BBCda, oo Wareysi la...
Kooras online ah,oo ingiriisiya ayuu kuu...
Mareegta aragtiwanaagsan.com oo saaka booqatay...